Faallo: Xariga Coldoon Dhaawac maku tahay Sumcada Somaliland? – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Faallo: Xariga Coldoon Dhaawac maku tahay Sumcada Somaliland? – VIDEO
Faallo: Xariga Coldoon Dhaawac maku tahay Sumcada Somaliland? – VIDEO
April 13, 2017 - By: Keyse Aadan
Waxaa todobaadkii tagay maxkamada Hargeysa ay xasbi labo sano ah ku xukuntay Cabdimalik Coldoon oo ah nin suxufi ah oo inta badan ka hadla arrimaha bulshada ayaa horaantii bishii Feberaayo lagu xiray Madaarka Hargeysa xili uu dib uga soo noqday magaalada Muqdisho.
Cabdimalik Coldoon oo ahaa nin wax badan ka shaqeenayey muddooyinkii danbe arrimaha samafalka lagu caawiyey muwaadiniin Soomaaliyeed, ayey xeer illaalinta Somaliland ku eedaysay inuu khatar ku yahay “Madax banaanida Somaliland”!
Muwaadinkan oo muddo todobaadyo ah xabsiga lagu hayey intaan Maxkamada la horgeyn ayaa ugu danbeyntii lasoo taagay Maxkamada Hargeysa, waxaana dacwada lagu oogay lagu soo qaatay qoraalo uu Cabdimaalik ku qoray bartiisa Facebook iyo tagitaankiisii Muqdisho.
Labada “Eedeyn” ee Maxkamada kusoo oogtay Cabdimalik ayaa kala ahaa;
1- Inuu tagay magaalada Xamar (Muqdisho) isagoo ka qeyb galay xafladihii Doorashada ee lagu taageeray Madaxweynaha xilka ku guuleystay ee Maxamed Cabdillahi Farmaajo.
2- In Qoraal uu ku qoray bartiisa Facebook meel uga dhacay sumcada Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland, kadib markii uu ka hadlay heshiiskii Somaliland iyo Imaaraadka ee saldhiga militari ee Berbera laga dhisayo, arrintaasi oo uu Cabdimalik bartiisa Facebook ku qoray in heshiiskan uuba kasoo horjeedo Madax banaanida Somaliland oo uu heshiiskaasi yahay mid ay saxiixday Dowlada Federaalka Soomaaliya, arrintaasi oo ay aflagaado ku tilmaamtay Xeer illaalinta Somaliland.
Intaanan u gelin saameynta ay yeelan doonto xukunka maxkamada ku riday, bal marka hore aan eegno sharciyan Labada Eedeyn waxa uu ka qabo Sharciga Somaliland u yaal ee Dastuurkooda iyo waliba Sharuucda Caalamiga ah.
Qodobka kowaad ee tagitaanka Muqdisho iyo taageerida Farmaajo, majiro sharci diidaya in shaqsi ahaan uu taageero ciduu doono siyaasada iyo tagi taanka Muqdisho midna maaha wax ka horimaanaya Dastuurka ama xeerka ciqaabta ee Somaliland iyadu dhigatay, iskaba daa shuruucda caalamiga ah oo arrintan aysan marnaba danbi ahayn.
Qodobkan Waxaana u baneenaya Dastuurka Somaliland qodobadiisa 10aad iyo 35aad oo u kala qoran sidatan:
QODOBKA 10AAD SINNAANTA MUWAADINIINTA
1. Muwaadiniinta Somaliland iyadoon lagu kala saarayn, midabka, qabiilka, dhalashada, luqada, lab iyo dhedig, hantida, mudnaanta, afkaarta iwm, waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman.
2. Kala sarreynta iyo takoorka ku salaysan isirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban yihiin. 3. Ajaanibka dalka Somaliland sharci ku jooga waxay xeerka hoostiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la siman tan muwaadiniinta.
QODOBKA 35AAD XUQUUQDA SIYAASADEED, DHAQAALE IYO BULSHO Muwadin kastaa waxa uu xaq u leeyahay in uu ka qayb galo hawlaha siyaasadeed,
shaqaale, bulsho iyo hiddaha si waafaqsan shuruucda iyo Dastuurka.
Eedeynta labaad ee ah in Coldoon uu ka hadlay heshiiska Berbera, sida uu qorayo Dastuurka Somaliland muwaadinka fikirkiisa waa ka dhiiban karaa arrimaha siyaasada, Cabdimalikna wuxuu fikirkiisa Facebook uu ku qoray wuxuu su ‘aal ku weydiiyey dowladiisa oo uu ka codsaday inay shacabka usoo bandhigaan Heshiiska rasmiga ah ee Saldhiga Berbera, taasi oo ay dowlada ku dhiiran weyday, balse ay muuqato in caradii ay kula duldhacday muwaadin su’aal weydiiyey.
Sumcada Somaliland iyo Ictiraaf Raadinta
Somaliland ayaa wakhti badan ku dhumisay inay ictiraaf caalami ah ka hesho caalamka, waxay dhaqaale badan ku bixisay in ay sameysay astaan ah Dimuquraadiyad inay ka jirto deegaanada Somaliland, iyadoo la dhisay sadex xisbi oo ay shacabka u codeyn karaan.
Balse dadaalkaas dheer waxaa jira arrimo aasaasi ah oo mar walba dhabar jabinaya dadaal kasta oo ay Somaliland u gasho inay taageero caalamka ka hesha, waxaana tiirarka ugu waaweyn oo hortaagan arrimahaasi kamid ah:
1- Xisbiyada la dhisay iyo Xukuumada Somaliland ayaa inteeda badan ku kooban waxay ay ku tilmaamaan beesha Dhexe, halka ay sheegaan in Beelaha darafyada aysan weli awood u yeelan inay helaan madax banaani siyaasadeed. Arrintan waxay dhaawaca ugu weyn ku tahay Dimuquraadiyada ay Somaliland ku doodo inay gaartay. Walow aan weli arrintan lagu guuleysan in la saxo Xisbiyadan ku saleysan Qabiilka.
2- Xoriyada Muwaadiniinta oo ah mid aysan dowlada dhowrin oo qof walba loo xiri karo fikirka uu aaminsan yahay ee Dastuurka Somaliland u fasaxayo, arrintan oo sidoo kale muujineysa in Garsoorka laftiisa uusan dhawrin Dastuurka iyo Sharuucda balse yahay mid ku dhex milmay Xukuumada oo had iyo goor taageera fikirka Dowlada xataa hadii ay ka horimaaneyso arrintaasi Qodobada Aasaasiga ah ee Dastuurka.
Somaliland ayaa ku dooda in Madax banaanideeda ay ku ansixisay Afti Shacabka laga qaaday, balse jawiga ka jira deegaanada Somaliland ayaa daliil u noqonaya inaysan jirin afti lagu kalsoonaan karo maadaama qofka loo xirayo haduu soo bandhigo fikirkiisa ah mid ka duwan fikirka “Beesha Dhexe” ee gooni u goosadka. Waxaana tusaale marag madoonto ah Xukunka Coldoon iyo kuwa lamidka ah oo ay ku jiraan Haween laftooda loo xiray inay calanka Soomaaliya darees uu ka muuqdo ay xirteen.
Qodobkan ayaa waxa lagu daaweyn karaa ah in Shacabka fikirkooda loo fasaxo taasi oo ay muuqato Xukuumada Somaliland inaysan wax kalsooni ah ku qabin shacabkeeda.
Wadada lagu helo ictiraaf iyo aqoonsi caalami ah maaha mid caburin iyo xarig ah oo taasi waaba mid ay ku andacoodaan inay ka gadoodeen dadka aaminsan madax banaanida Somaliland, waxaana dadaal kasta oo ay Somaliland u sameyso dhanka ictiraaf raadinta maja-xaabiya ficilada xoriyada ka fog ee xukuumadaasi kula kacdo shacabkeeda.
Haa Cabdimaalik Coldoon waa la xiray, kuwo lamid ah oo ay siyaasiyiin ku jiraan horaa loo xiray, suxufiyiin waa la xiray, culumaa’udiin sidoo kale, haween labis khaldan xirtay laftooda seefta waa qaaday, balse wax isbedal ah lagama filan karo in Somaliland loo aqoonsado maamul qaan-gaaray inta uu shacabkiisa u xirayo fikirkooda isla markaana ku tumanayo isla Dastuurkii ay iyagu dhigteen.
Waana Sumcad xumada Somaliland mar walba ka dhaxasho Ficiladeeda oo aysan wax ka baran!
Cabdimaalik Coldaan wuxuu markale astaan u noqon doonaa caburinta ka jirta deegaanada Somaliland ee dhanka fikirka ah, wuxuuna laftiisa ku muujiyey arrintan Hees ama suugaan uu kasoo tiriyey Xabsiga dhexdiisa oo uu ku yiri “…Dadku Xoolo Maahee Xero aad ku Oodeen!…”, waxaana ku luuqeenaya Fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac.